Imiyalo ye-Chitosan Evalar yokusetshenziswa, intengo > Ukwelashwa nokuvimbela
Kuyini chitosan? Imiyalo esetshenzisiwe, ukubuyekezwa kodokotela, ukwakheka, izakhiwo
I-Chitosan Evalar - Lesi isengezo esisebenzayo sebhayiloji, okuqinisa umphumela jikelele, esikhiqizwa enkampanini yezokwelapha i-ZAO Evalar. Into esemqoka yokusebenza kwesidakamizwa yi-chitosan.
Isici sento esebenzayo ye-chitosan.
Esikhathini esedlule, i-chitosan yatholakala ngokucubungula i-chitin ye-topgument engenhla yama-red-footed, isebenzisa ukwahlukaniswa kwenkimbinkimbi ye-carbonate, enikeza ubunzima emthanjeni ongaphandle we-crustaceans. Le ndlela yokukhiqiza i-chitosan, ngezinga lezimboni, ifakazele ukuthi iyabiza. Ngakho-ke, kwakudingeka ukuthuthukisa indlela yokukhiqiza i-chitosan evela kwezinye izinsiza zezinto eziphilayo, phakathi kwazo kwakukhona i-chitin yama-crustaceans amancane.
Ngokwakheka kwamakhemikhali, i-chitosan ingeyama-polysaccharides we-organic yemvelaphi yezilwane, ama-chitin monomers. Inhlayiya ye-chitosan inamaqembu amaningi ama-amino ekwakhiweni kwayo, okuyivumelayo ukuthi ihlangane nama-ion hydrogen futhi ithole izakhiwo zekhemikhali ye-alkaline ebuthakathaka. Lokhu kuchaza ukuthambekela kwe-chitosan ukubamba nokubopha ama-ion wanoma yiziphi izinsimbi, futhi kukhokhiswa kahle ama-isotopes omsakazo. Amaqembu e-amino amaningi we-molecule ye-chitosan angakha inani elikhulu lezibopho ze-hydrogen. Ngalesi sizathu, into ingavuselela ubuthi bayo obuningi ubuthi obunamagciwane kanye nezinto eziyingozi ezenzeka ngesikhathi kugayishwa kokudla esiswini.
AmaChitosan angakha izibopho ngama-molecule ezinto ezinjengamafutha ku-lumen yamathumbu amancane abantu amakhulu. Ukudalwa okuyinkimbinkimbi akubanjwanga ngamangqamuzana emathumbu futhi kamuva kudluliswa ngokwemvelo. Le mpahla ye-chitosan ikuvumela ukuthi uyisebenzise njengethuluzi elingavimba ukuqongelela ukugcotshwa kwamafutha, inciphise ukungena kwe-cholesterol ekudleni okudliwayo, futhi ithuthukise ukuncishiswa okudingekayo kwezindonga zamathumbu. Ukuqedwa kokuthathwa kwamafutha aqukethe okuqukethwe ngamathumbu kuphoqa umzimba ukuba usebenzise izinqolobane zawo zamafutha.
Ukuthola amandla nokuhlanganisa izinhlanganisela ezidingekayo ngumzimba, ezingaba nomthelela omkhulu ekwehliseni ungqimba lwamafutha ezingxenye zomzimba ezihlukene. Isisindo ngokweqile kanye namazinga aphezulu e-cholesterol esegazini aya ngokukhathazeka kakhulu abantu abaneminyaka engaphezu kwamashumi amathathu ubudala. Ukuze ulondoloze impilo enhle, kubalulekile ukunaka ukunciphisa ukungena kwe-cholesterol kusuka emathunjini kuya emithanjeni yegazi, okunciphisa kakhulu ubungozi bokuqalwa kwe-cholesterol plaque kuzo zonke izinto zomzimba.
Ukuqanjwa kwamathebulethi iChitosan Evalar.
I-Chitosan Evalar ikhiqizwa njengamacwecwe okuqala we-500 mg, efaka uNombolo 100 kwiphakethe. Isithako esikhulu esisebenzayo kulezi zibhebhe yi-125 mg ye-chitosan, i-10 mg ye-ascorbic acid powder, 354 mg ye-microcrystalline cellulose, edingekayo ekwakhiweni kwethebhulethi, ikhona. Ukuba khona kwe-silicon oxide, i-calcium stearate, kuyadingeka ngokuya ngobuchwepheshe bokukhiqiza amaphilisi. Ukulungisa ukunambitheka kwamathebhulethi, kufakwa i-flavour yokudla. Ukuba khona kwe-ascorbic ne-citric acid ekwakhiweni kuvumela umuthi esikhathini esifushane ukuthi uveze ngokuphelele izakhiwo zawo.
I-Chitosan Evalar iyisengezo sokudliwayo esinomphumela wokuqinisa ojwayelekile futhi iyatholakala kuzo zonke izigaba zabantu abaneminyaka engaphezu kwengu-12.
UChitosan, odala isisindo esimise okwenziwe ngejeli, unomphumela omuhle ekusebenzeni kahle kwamapheshana emathunjini, enza kube lula ukuhamba kwamathumbu:
Iyazisa futhi isuse imikhiqizo kadoti enobuthi futhi i-ion yensimbi enzima ipheshana namathumbu,
Ingasetshenziswa ngaphezu kwemithi ekwelapheni i-gallbladder,
Kuzibonakalisile ukuthi kunciphisa ukungena kwe-cholesterol ekudleni, esimweni samazinga aphezulu ale khompiyutha egazini,
Impahla yayo, ukuvimbela ukumuncwa kwamafutha okudla, ifuna ukulungiswa kongqimba lwamafutha omzimba.
Ukuqamba isisindo esinjenge-gel esigaxe esiswini namathumbu kungadambisa umuzwa wokulamba.
Izindlela zokusebenzisa iChitosan Evalar, inani lentengo emakhemisi.
Ukuvimbela imiphumela emibi yemvelo, izithasiselo zokudla iChitosan Evalar kunconywa ukuthi abadala baphuze amaphilisi ama-2 ekuseni nakusihlwa, imizuzu engama-30 ngaphambi kokudla, baphuze amanzi amaningi nabo. Isikhathi senqubo okungenani yezinsuku ezingama-30.
Ukunciphisa ukuhlangana kwamafutha, kubalulekile ukuthatha i-Chitosan Evalar ekuseni, ekudleni kwasemini, futhi kusihlwa, amaphilisi ama-4 ngaphambi kokudla. Inkambo, ngale ndlela yokuthatha amaphilisi, kungakuhle ukuyifeza izinyanga ezintathu. Ngemuva kwalokho bashintsha ukuthatha amaphilisi ama-2 ngaphambi kokudla ngakunye. Kulokhu, kufanele ulandele izincomo zokudla okulinganiselayo.
Intengo emakhemisi ku I-Chitosan Evalar isukela kuma-ruble angama-350-500 ngephakethe ngalinye lamathebulethi ayi-100. Asikukhuthazi ukuthenga umkhiqizo ngamanani ashibhile, ngoba ubungozi bokusebenzisa inkohliso buzoba ngaphezulu kakhulu, yiqiniso lokhu kusebenza ikakhulu ekuthengeni ezitolo eziku-inthanethi, ngakho-ke qaphela lapho u-oda lo mkhiqizo online.
Ayikho imiphumela emibi eye yabonwa kusetshenziswa umuthi. Noma kunjalo, akunconyelwe ukusetshenziswa:
Kuze kube yiminyaka engu-12,
Kwabesifazane ngesikhathi sokukhulelwa,
Uma umuntu esabela ekuthatheni izidakamizwa.
Ukuhlolwa kwathola ukuthi ukuphathwa isikhathi eside kwe-chitosan, kumithamo emikhulu, kuholela ekushonelweni kwamavithamini athile namaminerali angena emathunjini. Ukudla amavithamini, A, E, kwenzeka ngokuncibilika emafutheni, kuthi kanye nawo azokhishwa emzimbeni. Futhi, ngemvelo yayo, i-chitosan ihlukanisa futhi isuse izakhi zokulandela ze-calcium, i-magnesium ne-selenium emzimbeni. Ukudla isikhathi eside, okwanele kwalezi zinto kwenza ukwanda kwengozi yamathambo asebekhulile. Ukudonswa kwamavithamini ayinkimbinkimbi aqukethe amavithamini anombala ongamafutha A, E, D nezokulandela umkhondo: i-calcium, i-selenium ne-magnesium kuzosiza ukugwema le miphumela. Ukusetshenziswa kwenkimbinkimbi yamavithamini kufanele kwenzeke ngezikhathi ezihlukile ngokutholwa kweChitosan Evalar.
Kuyadingeka masinyane ukucacisa: zonke izithasiselo ezisebenzayo (okubizwa ngokuthi izengezo zokudla) akuyona imithi, okuphawulwe kuwo wonke amaphakheji. Yonke imibhalo elawulayo yokulawulwa kokukhiqizwa futhi oyisebenzisayo uyihlobanisa nezengezo zokudla. Izici zalezi zidakamizwa zingasetshenziswa njengezengezo ekwelashweni okuyinhloko. Izithasiselo azisoze zasebenza njengezidakamizwa ezithinta isifo somzimba womuntu.
I-Biological cellulose noma i-fiber ifana kakhulu kuzakhiwo ne-fibrin yomuntu, okuyingxenye yokuhlangana kwegazi. "I-Chitosan" iyakwazi ukucindezela amaseli womdlavuza, ilawula i-pH emzimbeni, ngaleyo ndlela ivimbele ukusakazeka kwe-metastases. I-Chitosan isidakamizwa esinganciphisa umfutho wegazi, sithuthukise i-microcirculation kwezicubu, silawule amazinga kashukela womchamo, i-adsorb futhi isuse nosawoti osindayo emzimbeni. Inomthelela ekwelapheni okusheshayo kokushiswa nokulimala kobuso, ngaphandle kokuyeka ukubabaza. Inomphumela we-analgesic ne-hemostatic.
Umuthi "Chitosan" unamazinga ahlukene wokuzihlanza. Kwenziwe, njengoba kushiwo ngenhla, kusuka kumagobolondo e-arthropods ngokuhlanza i-chitin kusuka kumakhompiyutha ekhabhoni. "I-Chitosan" noma i-chitin ehlanziwe inezindleko eziphezulu zokwenza imisebenzi ephezulu. Umsebenzi kuncike ekutheni yiliphi ibanga lokuhlanzwa (i-acycation) iChitosan etholakele, intengo izoba efanele. Isibonelo, iChinese "Chitosan" eneziqu eziphakeme kakhulu - 85%. Ngaphezu kwalesi sakhi, i-silicon, i-calcium, i-vitamin C, nokunambitheka kokudla kufakiwe njengezinto ezisizayo.
I-Chitosan isidakamizwa esingalaphi isifo esithile. Inika umzimba amandla ukusungula umsebenzi wayo futhi usebenze ngaphandle kokwehluleka. Lokhu kusiza ukuvikela ukuvela kwezifo ezithile eziyingozi. Umphumela onzima unje:
"I-Chitosan" - ithuluzi elihle kakhulu lokulwa nesisindo ngokweqile, alungenwa emzimbeni, ngenxa yalokho, lususa bonke ubuthi namafutha ngokweqile.
Kuqinisa amasosha omzimba, okusho ukuthi kuvikela umzimba ezifweni ezahlukahlukene, eziyingozi ezinkingeni zazo.
Ukulungiselela kuqukethe inani elikhulu le-calcium. Lokhu kuzokwanelisa umzimba futhi kugcine amathambo enempilo futhi eqinile. Ukuthatha izithasiselo kuvikela ekuhlaselweni okuhlukahlukene.
I- "Chitosan" ivimbela ukuhamba kwamaseli womdlavuza egazini, futhi ngenxa yalokho kuvimbe ukusakazeka kwalesi sifo.
Ukudla njalo umuthi kugcina izinga likashukela egazini lijwayelekile; isifo sikashukela cishe kungenzeka.
Ethatha izimbangela nezimpawu, "uChitosan" ugcizelela umfutho wegazi: phezulu noma phansi.
Iyakwazi ukubuyisela amaseli wesibindi noma ezimweni ezisezingeni eliphakeme kakhulu. Isibonelo, nge-cirrhosis.
Uma uthatha isinqumo sokunciphisa isisindo usebenzisa iChitosan, imiyalo yokusebenzisa izokuchaza ukuthi ithini ithonya umuthi onalo emzimbeni. Ngenxa yalokhu, ukwehla kwesisindo kwenzeka. Lapho uthatha "Chitosan" une:
Isisusa sangaphakathi siyathuthuka.
IMicroflora emathunjini ibuyela kokujwayelekile.
Ngaphandle kokutholwa, amafutha asheshe akhishwe emzimbeni.
Umzimba uhlanzwa ubuthi kanye nobuthi.
Zizwe ukucindezela kwesifiso.
Umuzwa wokugcwala uza ngokushesha okukhulu.
I- "Chitosan" isidakamizwa, sithatha umuntu adle ukudla okuncane kakhulu kunokujwayelekile. Amafutha aqedwa ngokushesha, isisindo siyalahleka. Ngasikhathi sinye, umphumela omuhle we-chitin usetshenziswa kuzo zonke izitho, ukuphulukisa umzimba, isimo siyathuthuka. Izinga le-cholesterol lilawulwa, umfutho wegazi uyabuyiselwa, i-microcirculation yegazi ibuyela kokujwayelekile, isifo sokuqina kwemithambo yegazi nesifo senhliziyo kuvinjelwe. Ngokuvamile - ukuvuselelwa komzimba.
Izici zeChitosan zinethonya lokupholisa elingenakuphikwa emzimbeni, ngakho-ke lesi sidakamizwa singathathwa cishe yiwo wonke umuntu uma kungekho ukungahambisani nezinto eziphazamisayo ezakhiweni. Izinkomba zokusetshenziswa zingaba ngokulandelayo:
Ukuze ukhuphule ukungasebenzi komzimba, yenza ngokwejwayelekile izinga le-pH lomzimba.
Ukucindezela ukukhula kwe-metastases, umdlavuza, ukudakwa.
Ukususa ubuthi emzimbeni ngemuva kwe-chemotherapy, ukwelashwa ngezidakamizwa, ukwelashwa ngemisebe. Ngemuva kokufaka ubuthi ngezidakamizwa, izinto ezinobuthi.
Lapho usebenza ezimboni ezinobungozi, lapho uhlala ezindaweni ezingathandeki imvelo.
Ukunciphisa imisebe ye-electromagnetic. Lapho usebenza nekhompyutha, ubukela i-TV, usebenzisa i-microwave.
Ukuvimbela imivimbo, ukushaya kwenhliziyo. Ukwelashwa kwe-hypertension, ischemia, ukwehlisa i-cholesterol.
Ukuvimbela kanye nokwelashwa kwesibindi.
Ngezifo zepheshana esiswini.
Ngama-allergies ahlukahlukene, i-asthma ye-bronchial, i-rheumatoid arthritis.
Ngamanxeba, ukushiswa kunomphumela "wesikhumba esiwuketshezi".
Ekuhlinzeni, ukwelashwa kwe-sutures.
"Chitosan" ("Tiens"). Imiyalo yokusebenzisa
"Ama-Tiens" akhiqiza i- "Chitosan" ngesimo samaphilisi. Kunconywa ukuthi ubaphuze ekuseni ngesisu esingenalutho ngaphambi kokudla kwasekuseni cishe emahoreni ayi-2, futhi kusihlwa amahora amabili udlile. Geza phansi ngengilazi yamanzi. Inani lamanzi kufanele lanele, ngoba uma lixutshwe kabi, lingadala ukuqunjelwa. Udinga ukuqala ukuthatha umuthi nge-capsule eyodwa ngesikhathi, ukhuphule umthamo kuya kokuthathu. Isifundo lesi kufanele sisukele enyangeni ukuya kwezintathu.
Uma une-acidity ephansi, kufanele uphuze ingilazi yamanzi ngejusi kalamula ngemuva kwe-capsule. Kunconywe ukusebenzisa i- "Chitosan" yezifo zesisu kanye ne-oncology, ukuyikhulula elumbeni futhi uyiqede emanzini afudumele.
Uma umuthi usetshenziswa njenge-chondroprotector ukuze ubuyisele umsebenzi ohlanganyelwe, lapho-ke udinga ukuwusebenzisa isikhathi eside nakumithamo emikhulu.
Ezimweni zokuphuza kakhulu, njalo emahoreni ama-2, amaphilisi angama-2.
Ohlelweni lokunciphisa isisindo, thatha amaphilisi ama-2 isigamu sehora ngaphambi kokudla nengilazi yamanzi, bese ugcina ukulinganisela kwamanzi usuku lonke, uphuze okungenani amalitha ayi-1.5-2 ngosuku.
Ngingayisebenzisa kubantu besifazane abakhulelwe?
Uma uthatha isinqumo sokuthatha iChitosan, imiyalo yokusebenzisa izongenisa kulezi zinto ezilandelayo eziphikisayo:
Ukungezwani komzimba kanye ne-hypersensitivity kuzakhi zokwakha.
Kungani uChitosan enganconywa kwabesifazane abakhulelwe? I-Chitin ngokwayo ingangena kalula kwi-placenta, okuyinto fetus engayidingi nhlobo. Futhi, lapho usuthisa kanye nobisi lukamama, le nto ingangena emzimbeni wosana olungakakwazi ukuthola into eyinkimbinkimbi enjalo.
I- "Chitosan" ayinconywa ukuthi ihlanganiswe nemithi yamavithamini neyamafutha, inciphisa kakhulu ukusebenza kwesengezo sokudla.
Isicelo ukuhlinzwa kanye cosmetology
I-Chitin isetshenziswa kabanzi ku-cosmetology kanye nokuhlinzwa, ngenxa yezakhiwo ezinjenge-antifungal, antibacterial, antiviral. Lokhu kwenza ukuthi sikwazi ukusebenzisa izidakamizwa ezine-chitin ngezinhloso ze-biomedical ekugqokeni amanxeba, ekuhlinzeni imithungo, ekwelapheni izifo ezitholakala ngezikhathi ezithile, njengesijobelelo sokuhlinzwa kwe-cataract. Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi i-"Chitosan" ayibangeli ukungezwani komzimba, odokotela bathi akukho lapho ukusetshenziswa kwenqatshiwe kwaqedwa khona. Ukushaja okunamandla okunamandla kuhlotshaniswa kalula nezindawo "ezingezinhle", kungaba isikhumba nezinwele. Ngakho-ke, lesi sidakamizwa saziswa kakhulu phakathi kwezazi zokugcoba. Ngokuvamile kusetshenziswa odokotela abahlinzayo beplastiki. Akubangeli ukwenqatshwa kwezicubu, kukuvumela ukuthi upholise ngokushesha izibazi esikhunjeni.
Ukubuyekezwa kodokotela namakhasimende
Njenganoma yisiphi isengezo sokudla, iChitosan ibangela izingxoxo eziningi. Ukubuyekezwa kodokotela bathi, noma kunjalo, ukuthi umuthi uyithuluzi elifanele elingalimazi umzimba. Inezakhiwo eziningi eziwusizo. Ukusetshenziswa kwomuthi, umphumela wawo omuhle sekuvele kufakazelwe izindaba eziningi. Ngenxa ye-chitin, i-cholesterol iyancishiswa, amanoni awathelwa, futhi ubuthi buyasuswa emzimbeni. Kusiza kakhulu lesi simo ngisho nasezigulini ezinzima, amandla ayabuyiselwa, isisindo siyancishiswa. Izakhi zingokwemvelo ngokuphelele, zinemvelo imvelo. Ngokwemvelo, ukubuyekezwa okungekuhle kushiywe yilabo, abasebenzisa i- "Chitosan" ukunciphisa umzimba, abangazange balandele imithetho yokuphuza umuthi, abazange banamathele ekudleni noma bangagcinanga ngokomzimba ngokomzimba. Ukudla ngokungafanele futhi ngokungahambisi umuthi, kungenzeka ukuthi noma ngubani azokwazi ukuthola umphumela oyifunayo.
Kumakhemisi amakhasimende, i- "Chitosan" itholakala kuphela eRussia, emelelwa yinkampani i- "Evalar", intengo yayo isukela kuma-ruble angama-250 kuya kwangama-300, ngokuya ngesifunda. Amaphilisi angama-100 iphakethe ngalinye. Noma uthatha imithamo ekhuphukile, ngeke uchithe ama-ruble angaphezu kwenkulungwane esifundweni ngasinye.
Uma ufuna ukusebenzisa imikhiqizo yeTiens Corporation, kulokhu intengo izophakama kakhulu kuChitosan, futhi ngeke uyithenga ekhemisi elivamile. I-Tiens yinkampani enkulu yenethiwekhi esabalalisa izithasiselo zayo zokudla ngokusebenzisa abamele okulula ukuthola kwi-Intanethi. Intengo yesidakamizwa isukela kuma-ruble angama-2200 kuya kwangama-2500 ngebhokisi ngalinye le-100.Sichaze izinzuzo zesidakamizwa saseChinese, esisodwa okufanele sisisebenzise, ​​ukuze wonke umuntu athathe isinqumo.